सरकार र डा. केसी पक्षबीच वार्ता प्रारम्भ – News Portal of Global Nepali
सरकार र डा. केसी पक्षबीच वार्ता प्रारम्भ
काठमाडौं । एक हप्तादेखि रोकिएको डा. गोविन्द केसी पक्षधर र सरकारबीच मंगलबार साँझ पुनः वार्ता सुरु भएको छ । डा. केसीको वार्ता टोलीले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने पूर्वशर्त छाडेपछि सरकारी टोलीसँग संवाद सुरु भएको हो । वार्ता शिक्षा मन्त्रालयमा भइरहेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसंग र माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमासहितको अनौपचारिक छलफलपछि दुवै पक्षबीच औपचारिक रुपमा वार्ता सुरु भएको हो । सो छलफलमा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक माथि छलफल भएको थियो ।
वार्तामा सरकारी तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका सचिवसहितको पुरानै टिम रहेको छ भने डा. केसीको तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रको संयोजकत्वमा सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकाश अर्याल, अभिषेकराज सिंह र सुमित पाण्डे सहभागी हुनुहुन्छ ।